होलीमा किन खेलिन्छ रंग ? जान्नुहोस् होली र रंगबारे रोचक तथ्य | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more होलीमा किन खेलिन्छ रंग ? जान्नुहोस् होली र रंगबारे रोचक तथ्य
होलीमा किन खेलिन्छ रंग ? जान्नुहोस् होली र रंगबारे रोचक तथ्य
फागुन २६ गते, २०७६ - १४:३१
काठमाडौं । हिन्दु समुदायमा होली कहिलेदेखि मनाउन थालियो र रंग कहिलेदेखि खेल्न थालियो त्यसको एकिन छैन् । तथापि होली र रंगबारे भने निकै कथाहरु भेटिन्छन् । साथै परम्परा नै बनेको होली र रंगखेल्ने बारे पनि फरक–फरक तथ्य भेटिन्छ ।
यस्ता तथ्यबारे धेरै मानिसहरु अनविज्ञ हुनसक्छन् । आज हामी तपाईंलाई होली र रंग खेल्नु पछाडिको तथ्य बताउँदै छौं । जानौं होली र रंगबारे केहि रोचक तथ्य :
१. प्रह्लाद र होलिकाको कथा
होलीको बारेमा सबैभन्दा प्रचलित कहानी प्रह्लाद र होलिकाको हो । हिरण्यकश्यपको बहिनी होलिकालाई ब्रह्माजीबाट बरदान स्वरुप एक विशेष बस्त्र प्राप्त भएको थियो । जसलाई ओढ्दा उनलाई आगोले केहि असर गर्दैनथ्यो ।
यहि बरदानको फाईदा उठाउँदै हिरण्यकश्यपले भगवान विष्णुको भक्त र आफ्नै पुत्र प्रल्हादलाई मार्न चाह्यो । यसको लागि होलिकाले दाउराको खालमाथि प्रल्हादलाई लिएर बसि । दाउरामा जब आगो लगाईयो त्यस समय हावाको एक झोंका आएर आगोबाट रक्षा गर्ने उक्त वस्त्र उडाएर प्रल्हादलाई ओडाइदियो । जसको कारण प्रल्हाद जिवित रहे भने होलिका जलेर मरि ।
जब मानिसहरुले यो घटनाको बारेमा जानकारी पाए त्यस समय उनिहरुले गुलाब रंगको साथ निकै उत्सव मनाए । त्यस घटनाको सम्झनामा मानिसहरुले रंग खेल्न थालेका हुन् ।
२. भगवान शिव र कामदेवको कथा
होली मनाउने दोस्रो कारण भगवान शिव र देवी पार्वतीको पहिलो भेट पनि हो । कथाअनुसार तारकासुरको बध गर्नको लागि भगवान शिव र पार्वतीबीच विवाह हुनुपर्दथ्यो । तर भगवान शिव तपस्यामा लिन थिए । यस्तोमा भगवान शिवसँग देवी पार्वतीको मिलन गराउन देवताहरुले कामदेव र रतिका साहारा लिएका थिए ।
कामदेवले भगवान शिवको ध्यान भंग गरिदिए । जसबाट आक्रोशित भएका शिवले कामदेवलाई भष्म गरिदिए । तर यस घटनामा शिवले पहिलो पटक देवी पार्वतीलाई देखेका थिए ।
कामदेवको भष्म हुँदा रति विलापमा परिन् । देवताको अनुरोधमा भगवान शिवले कामदेवलाई बिना शरिर रतिको साथमा रहने आर्शीवाद दिए ।
कामदेवको पुनः शरीर प्राप्ती श्रीकृष्ण भगवानको पुत्र प्रधुम्नको रुपमा भयो । शिव पार्वतीको मिलन र कामदेवको पुनः जीवन मिलेको खुसीमा देवताले आजकै दिन रंगोत्सव गरेका थिए ।
३. पृतना नामक राक्षस्नीको बध गरेको सम्झनामा
पृतना नामक राक्षस्नीलाई कंशले भगवान श्रीकृष्णको बधको लागि पठाएका थिए । पृतनाले श्रीकृष्णका अपहरण गरि आफ्नो विषालु दुधको स्तनपान गराउन लागि । श्रीकृष्णले स्तनपान गर्ने समय पृतनाको प्राण नै लिए ।
मानिसहरुले जब राक्षस्नी पृतनाको शरीरमाथि श्रीकृष्णलाई जीवित भेटाए तब निकै खुसी भए । पृतनाको अन्तिम संस्कार गरियो र रंगोत्सव मनाईयो । यहि घटनाको सम्झनामै गोकुलबासीले रंग खेल्न थालेका हुन् ।
४. ढुंढी नामकी राक्षस्नी लाई धपाएको कथा
होलीको रंग उत्सवको पछाडि एक ढुंढी नामकी राक्षस्नीकाे कहानी पनि भेटिन्छ । यस राक्षसीले राजा पृथुको राज्यमा हाहाकार मच्चाएकी थिइ । भगवान शिवको बरदानको कारण यसको मृत्यु अस्त्र–शस्त्रबाट हुन सक्दैनथ्यो । बरदाको कारण उक्त राक्षसीले मानिसहरुलाई निकै सताउन थाली । उसले मानिसहरुका साना साना बच्चाहरुलाई खाई दिन्थी ।
ढुंढी राक्षसीको आतंक मेटाउन पुरोहितले एउटा घटना बनाए । उनिहरुले फाल्गुनको पूर्णिमाको दिन सबै बच्चाहरुलाई जम्मा गरेर खुब रमाईलो गरेर मोजमस्ती गर्न लगाए । ढूंढी राक्षसी जब त्यहाँ पुगी बच्चाहरुले दाउरा जलाउँदै खुबै स्वर निकालेर रमाईलो गरिरहेका थिए । जसलाई देखेर ढूंढी भागी ।
यस घटनापश्चात मानिसहरुले चैनको श्वास लिए । उनिहरुले रंगको प्रयोग गरेर खुसीयाली साटे । यसै दिनको सम्झानामा कतिपय मानिसहरुले रंग खेल्दै होली मनाउने गर्दछन् ।
साथै भगवान श्रीकृष्णको लीलामा राधासँग होली खेलेको कथा पनि पढ्न पाइन्छ । जहाँ भगवान श्रीकृष्ण राधाको गाउँ नन्दगाउँ गएको कथा पढ्न पाइन्छ ।
फागुन २६ गते, २०७६ - १४:३१ मा प्रकाशित